भक्तपुमा आज कति थपिए कोरोना संक्रमित ? « Lokpath
२०७७, १ कार्तिक शनिबार १६:४७
भक्तपुमा आज कति थपिए कोरोना संक्रमित ?
प्रकाशित मिति : २०७७, १ कार्तिक शनिबार १६:४७
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा भक्तपुर जिल्लामा मात्रै १४३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा थपिएका १ हजार ७४६ जना संक्रमित मध्ये १४३ जना संक्रमित भक्तपुरका रहेका छन् ।
बाँदर धपाउने गजबकाे आइडिया, बाघको तस्वीर देखेपछि आउनै छाड्यो
कोरोनाले मृत्युको तथ्यांकै गलत, सरकारको जताततै लापरवाही